Inona no tokony ataonao any Dubai? | Asa - Asa - Karohy ny asa an-tsambo any Dubai
Inona no tokony hataonao ao Dubai?
Tanjona ny ho iray amin'ireo tanàn-dehibe futuristika eto amin'izao tontolo izao
Enga anie 22, 2019
Dubai dia fantatra amin'ny anarana hoe tanànan'ny orinasa
Enga anie 25, 2019
Inona no tokony hataonao ao Dubai
Inona no tokony hataonao raha mitady asa any Dubai ianao?
Eny ary, raha mitady asa any Dubai ianao. Misy zavatra vitsivitsy tokony ho fantatrao alohan'ny hampiharana anao. Ary mazava ho azy, fantatsika rehetra fa tsy asa mora tanterahina. Ny mafy indrindra indrindra dia hitandrina ny sainao hatramin'ny farany. Aza midina fotsiny ary tohizo ny fahombiazanao. Aoka ianao ho marina mora ny manoratra. Sarotra lavitra amin'ny fitantanana azy.
Raha mbola ianao mitady asa any Moyen Orient, misy zavatra vitsivitsy tokony hialanao. Indrindra raha toa isika ka miresaka asa any Dubai sy Abu Dhabi.
Ny fahaiza-mieritreritra mandresy ny fahaiza-mahita!
Ny Fomba fanao mahazatra indrindra amin'ny asa fikarohana mba hisorohana
1. Zava-dehibe ny fampahalalana ao amin'ny resume
Tsy mandeha tsara ny zavatra iainana amin'ny sehatry ny asa amin'ny fandaharam-pianarana raha tsy manoratra ny tena ilaina amin'ny tolotra asa ianao. Ny tsara indrindra dia ny mampiseho izay anananao hanolotra mety ho mpampiasa miasa any Afovoany Atsinanana.
Ny CV-nao dia tokony ho mikasika ny azonao atolotra ny mpampiasa recruiter na HR manager. Satria io irery no olana ho an'ny mpampiasa. Ny ratsy indrindra ny cv anao dia ny hanoratra izay tadiavinao amin'ny tolotra asa. Ataovy azo antoka fa mampiditra traikefa sarobidy fotsiny ianao. Ohatra, tsy mila ampidirinao ny tantaran'ny asa 34 hatramin'ny nanombohanao nivarotra sigara isaky ny $ 1 ao an-toerana. Tsy ilaina ny hampidirana ny datin'ny diplaomanao amin'ny lise, na ny anao tiana hatao amin'ny andronao.
Iza no tena mpifaninana aminao?
Olona an'arivony nandefa CV azy manokana tany Dubai. Noho izany, amin'ny ankapobeny, tsy misy afa-tsy segondra 3 ianao mba hanome fahatsapana ny mpahazo mpiasa na mpitantana ny HR. Ka alao antoka fa ny CV anao dia tsara alohan'ny handefasanao izany any amin'ny sampana HR.
Ny tena vahoaka Ny fitadiavana asa ao Dubai dia Indiana, Pakistane ary Iraniana. Azonao antoka fa ny ankamaroan'izy ireo dia miasa mafy mafy mba hahazoana asa any Afovoany Atsinanana. Ny ankamaroan'ny mpiasa vahiny dia manamarina an'i Dubai bilaogy ho an'ny toro-hevitra amin'ny asa fitadiavana. Ary mampiasa ny fahalalàna izy ireo mba handraisana asa be dia be lavitra noho ianao !.
2. Aza manampy Zava-dehibe ny fampahalalana ao amin'ny taratasinao
Ny mpitantana any Dubai sy ny ekipa departemanta HR tsy mila mamaky momba ny zavatra niainan'ny adaladala manokana. Na dia tsy nahomby na nahazo sekoly ambony ianao ho mpanjaka ny zava-bita.
Tokony mametraka ny antony ilainao ity tolotra asa ity. Aza manoratra na inona na inona momba ny antony tsara indrindra ho anao. Satria ao anatin'ny toe-javatra ratsy ianao ary mitady fanampiana ianao. Mpikambana ao Dubai halany fotsiny manjary be dia be.
Ny antony iray hafa dia ny toe-javatra iainanao sy ny fianakavianao. Izy ireo, mazava ho azy, dia tokony hitokana ho anao irery. Tahaka ny resinaoo, te hahalala ny mpikarakara mpikarama izay azonao atao ho an'ny orinasa.
Inona no tokony hifantohanao?
Manandrama mihazona ny taratasinao mifantoka indrindra amin'ny tolotra asa ity. Ataovy azo antoka fa mametraka tsipiriany ampy momba ny antony maha mpanatanteraka tena anao ianao ho an'ny asa ary mendrika hanaovana dinidinika. Etsy andaniny, ataovy izay hahitan'ny mpampiasa anao ho olona sarobidy avy any ivelany.
Alao foana ny fotoana alohan'ny handefasanao ny antsipiriany. Alaivo antoka Ahoana ny fomba hanoratana taratasy fanoratana isaky ny mpampiasa. Eny, fantatsika fa asa sarotra izany. Fa io no hany fomba hahazoana asa any Dubai. Ampifanaraho amin'ny alàlan'ny tolotra asa foana ny mari-pahaizana mendrika. Ka ilay mpitsara dia afaka mahita ny antony mahavoarohiranao anao.
3. Ny traikefa sy ny kalitao momba ny Joba
Ataovy azo antoka fa mifanentana ianao ny zavatra niainanao amin'ny tolotra mety hitranga. Fikarohan-karoka dia dingana maharitra tany UAE. Ka raha ny tena izy, ny traikefa anananao amin'ny asa an-tserasera voasokajy dia mila ho tonga lafatra. Eny, amin'ny ankapobeny miteny, dia tokony ho akaiky ny tonga lafatra any Dubai ny traikefa anananao. Satria misy an'arivony ny olona any Moyen Orient sy Azia.
Ary isan'andro dia mandefa CV ho azy ireo amin'ny mpiasa mpandray mpiasa. Noho izany, miezaha hanana traikefa akaiky akaiky kokoa. Ary ataovy azo antoka fa mifanaraka amin'ny asa sy ny maha-mpilatsaka anao ny zavatra niainanao.
Inona no zava-dehibe?
Tena zava-dehibe tokoa ny manararaotra ny fotoana sy ny ezaka indrindra amin'ny toerana be olona toa an'i Dubai. Ary fitadiavana miadana ny tolotra omena dia mifanaraka amin'ny toetranao amin'ny filazalazana ny asa.
Anjarano ny mampiseho ny tompon'andraikitra amin'ny mpikarama fa maninona tonga lafatra ho an'ny asa ianao. Avelao tsy ho ao amin'ny equation ny fikavina.
4. Mijeroa hiasa asa iray minitra monja taorian'ny fanadihadiana
Fahadisoana iray hafa koa azonao atao ny manao fitafiana tsy mendrika amin'ny fanatontosana asa any Dubai. Mazava ho azy fa firenena firenena silamo ity firenena ity, saingy miasa tsara eto amin'ity firenena ity ny etika fandraharahana.
Aza miala aloha loatra tamin'ny dingana fanadihadiana. Satria mety handratra anao toy ny tsy fatra adala izany. Talohan'ny mahazo fanasana amin'ny fivoriana ianao mba hanandrana manao fikarohana kely momba ny orinasa sy ny tontolon'ny asa.
Azonao angatahina amin'ny hafa ve ny hevitry ny hafa?
Fantatrao ve ny olona ao amin'ny fikambanana izay narahinao fotsiny ?. Raha tsy mampiasa an'i Linkin ary anontanio ny olona miasa ao amina code code bolo. Ka mba tsy azonao antoka ny antsipiriany lazao ny hafa fa tsotra sy mahomby. Anontanio ny hafa ny zavatra ifaneraserany isan'andro. Izay no ho voalohany Ny mpiasa mpikarama dia ho voamarika ao Dubai.
5 milaza ny zava-dratsy ao amin'ny Joba Interview
Ny teboka fahadimy dia ny filazana ny zavatra tsara amin'ny fotoana mety. Raha vao nampiharina tamin'ny famerenana sy famoahana taratasy ianao. Mpanafaka avy any Dubai dia hanana hevitra momba iza ianao ary inona no ataonao mba fivelomana.
Maherin'ny 60% amin'ny antsipirihany miresaka ratsy. Tsy tokony holazaina fa izany dia tsara kokoa ianao dia tokony avela hanaratsy tsy mendrika amin'ny fanjakana ianao antsipirihany mandritra ny dinidinika amin'ny asa. Ohatra, ny tsy miankina na ny orinasanao dia tsy mahomby mandritra ny fampandrosoana ny asa. Na amin'ny lafiny iray, fa maninona no nisy tapa-bolana vitsivitsy teo amin'ny zavatra niainanao.
Ny dinidinika dia tokony hiresaka momba izay azonao atao ho an'ny orinasa raha nanolotra anao ilay asa. Zarao ny fahaiza-manao sy ny toetra mendrika izay mahatonga anao ho olona mety tsara amin'ilay toerana. Inona no tokony ataonao any Dubai ?.
Mampifantoka ny tenanao amin'ny fanaovana lalao eo anelanelan'ny tenanao sy ny tolotra momba ny asa. Amin'ny lafiny iray, ny fomba fitenenana be loatra dia mety handondona anao amin'ny safidy ho an'ny kandidà amin'ny asa iray.
Stop 6 - Fanadinadinana ireo hadisoana ao amin'ny UAE
Ny Emirà Arabo Mitambatra dia izao fomba tsara kokoa noho ny firenena rehetra. Ary raha azo antoka ao Dubai, Abu Dhabi na Sharjah Hanao fanadihadiana iray izay tsy nahomby ianao.
Indraindray, tsy natao fotsiny izany, ary ny traikefanao no fomba mety amin'ity tolotra asa ity. Na dia afaka manao resadresaka aza ianao dia tsy nitsoka azy tao amin'ny UAE.
Na izany aza misy ny resadresaka sasany sy hadisoana amin'ny ankapobeny izay mora azo. Ohatra, aza tara aza miandry fiantsoana intsony. Izany fotsiny dia tsara kokoa miantso ny mpiasa mpahazo mpiasa ary asehoy azy fa mila asa ianao.
7 Fantaro fa manana referans avy amin'ny UAE ianao
Iray amin'ny ankamaroan'ny antsipiriany manan-danja amin'ny fahazoana asa any Dubai. Angaha manana andian-teny vitsivitsy avy amin'ny fikambanana miorina ao Dubai ao amin'ny CV-nao. Ary vonona foana hanome ny antsipiriany momba ny fifandraisana rehefa manao asa fikarohana ianao.
Ireo mpitantana ny Human Resource dia hijery ny tsirairay amin'izy ireo.
Ny tranga ratsy indrindra tsy tianao hitranga dia ny nahazo ireo mpiara-mitantana anao tamin'ny minitra farany ka lazainy amin'izy ireo fa mila manome antoka ianao fa tsara sy tsara ny hery miasa azonao atao.
Aleo miantso ny departemanta HR anao amin'ny voalohany. Avy eo, mamorona lisitr'ireo tondroina efa vonona hanome avy amin'ny orinasam-pifandraisan'ny United Arab Emirates ihany. Inona no tokony ataonao any Dubai ?. Ataovy misokatra ny safidinao manokana ary aza mandoro tetezana. Tsy fantatrao mihitsy ny fotoana ilainao azy ireo.
8 Mivadika mba hanaraka ny fanadinadinana
Fitondran-tena ratsy hafa ny tsy manaraka aorian'ny dinidinika amin'ny asa. Amin'ny tranga sasany dia afaka manampy anao hahazo asa izy. Hisy, ohatra, ny manome anao fotoana iray hafa hahatsiarovana anao sy manaova fahatsapana tsara.
Toy ny mpandray anjara ao Dubai ankasitrahana amin'ny fotoanany sy ny ezaka ataony. Noho izany, mailaka fisaorana misaotra misaotra matetika iray andro aorian'ny dinidinika. Azo antoka fa fomba tsara hanehoana anao io mankasitraka ny fotoana sy ny fotoana tsy maintsy anaovanao.
Ny fanarahana dia manome anao fotoana hafa indray hampiala ny sasany amin'ireo zava-dehibe hohadinoinao. Ohatra, izay rehetra ilainao nandritra ny tafatafa. Toy ny traikefa anananao amin'ny orinasa xyz. Na fanamarinana fanampiny izay mety hanampy azy ireo hanapa-kevitra ny hitondra anao eny ambony sambo.
9 Mandao ny adiresy misy anao amin'ny lafiny ratsy
Ny ankamaroan'ny vokatra eto Dubai. Tsy mieritreritra izy ireo amin'ny fomba tsara. Eny, inona no tokony ataonao any Dubai ?. Tsy milaza zavatra ratsy momba ny orinasa rehefa miaina ianao.
Satria zava-dehibe izay lazainao io eny an-dàlana miala amin'ny orinasa. Ary raha azo antoka mpitantana, mbola misy mahatadidy anao. Noho izany, ny resaka momba anao dia misy dikany amin'ny fotoana maharitra.
Ohatra, ireo mpikirakira tonga dia mandinika fitenenana avy amin'ny 3 farany hatramin'ny mpampiasa 6. Noho izany, raha nandao ny asanao farany ianao amin'ny marika ratsy. Ary ny mpitantana avy any dia hilaza fa nanao hosoka ianao mety hiverina ho fampahasosotra anao. Noho izany, miezaha hampiasa ny atidohanao ary mitazona fandinihana fihetseham-po. Ambonin'izany, aza milaza mihitsy ny orinasanao diso izany.
10 Inona no tokony hataonao ao Dubai?
Miezaha foana hitadidy ny sainao amin'ny fomba mety. Aza manandrana manao fitaka mihitsy. Ny fomba tsara indrindra dia ny fanaovana ny marina ary miasa mafy hanatratrarana tanjona iray. Dubai dia firenena tena hentitra izay tsy mamela ny asan-jiolahy. Ankoatr'izay, ny fanapahan-kevitra ratsy rehetra dia hiteraka korontana ary hipetraka ao a fonja an-toerana any Dubai na hoentina any an-tanindrazanao ianao. Zava-misy izany, ary hihatra aminao izany.
Ny fahaizana mieritreritra mialoha ny fahaiza-manao.
Hetsika mavesatra Ataovy ny asa nofinofinao!
Ao an-tsaina, Indiana sy Pakistani miezaka ny hahita asa any UAE. Noho izany, amin'ny fifaninanana henjana isan'andro, toa tsy ho vita izany asa izany. Raha ny tena marina dia teny fotsiny izy.
Ka miloa ny tenanao ary mamango dinidinika vitsivitsy momba izany. Fantatrao izao izay tsy azonao atao any Dubai. Izao no fotoana hitadiavanao ny fikatsahanao ny drafitry ny hetsika. Ny taratasy sy ny taratasy fanakona dia tsy maintsy voatsindrina sy soratana tsara.
Ahoana ny fomba hametrahana dinidinika? Ataovy fotsiny!
Na dia izany aza, maro amin'ireo mpitsoa-ponenana, na ireo mpitantana za-draharaha tsara avy any Afrika Atsimo ary Filipiana. Indraindray dia sarotra ny mahita tafatafa mendrika amin'ny fandraharahana midadasika.
Ilainao hialana amin'ny karazana fahadisoana sasany ataon'i Dubai. Satria hampihena ny voka-dresakao ny hisafidy ny hahazo toerana. Ary ho azo antoka fa ahena ny vintana ho anao amin'ny famoahana izany Tolotra asa fitantanana manokana.
Miezaka foana izahay hiantoka mpikatsaka asa any ivelany. Ny fepetra mitovy amin'ireo mpila ravinahitra any Dubai. Ary ny Moyen Orient dia tena toerana tsara izay miandry ny hoavinao.
Noho izany, raha manaraka ny UAE fitsipika mendrika. Tokony mahazo asa any Dubai na Abu Dhabi ianao. Ary miezaha foana hanao ny nofinofinao ho zava-misy. Na inona na inona ratsy toa inona. Miezaha hialana amin'ny potholes. Ary miady amin'ny fofonaina farany.
Inona no tetika ampiasain'ny mpianatra efa nahazo diplaoma?
Ao amin'ny toerana ratsy indrindra mpianatra efa nahazo mari-pahaizana vao vita. Tsy mitombina fotsiny ny antony tsy hananan'ny mpianatra tanora rehetra ny fotoana ahazoana asa any Dubai.
Ny tanora fangatahana asa zandriny dia hanandrana manatanteraka io trosa be goavambe io rehefa avy izy ireo diplaoma amin'ny anjerimanontolo. Dia avela ho irery izy rehetra. Ka, raha ny tena izy, mila mitady vola be dia be izy ireo.
Amin'ny maha olom-baovao amin'ny tsenan'ny asa any Dubai. Mila manomboka ambany ianao, ajanony ny fieritreretana fa olona nahita fianarana. Mila manomboka miadana miadana amin'ny tontolo orinasa ianao. Avy any-tsy misy manilika. Ho an'ny olona rehetra, na inona na inona fizotry ny fianarana azy ireo mitantana mba hanao asa any Dubai.
Inona no tetika ampiasain'ny mpitantana any Dubai?
Ny olona za-draharaha manana safidy maro kokoa. Saingy ao amin'ny Emirates Arabo Mitambatra, misy tontolo misy vava sy fifandraisana ho toy ny laharana iray izay ahafahanao mamela anao ahazoana asa eo amin'ny ambaratonga fitantanana.
Mety hihevitra ianao fa tsy rariny izany ho anao ho toy ny sakaiza. Saingy manome ny orinasanao amin'ny olona izay tsy fantatrao akory aza ianao ?. Noho izany, tsara fanahy i Dubai saingy misy lalàna izay tsy maintsy arahanao. Ary raha manakarama olona diso ianao ary manao fahadisoana.
Mampalahelo fa fahadisoana mpamatsy vola ary ara-dalàna izy no tompon'andraikitra amin'ny fanamboarana izany. Ary amin'ny ankamaroan'ny tranga izay miteraka adin-tsaina be sy vola be ary mazava ho azy volana vitsivitsy.
Mpitantana ao Dubai
Famaranana - Inona no tokony hataonao ao Dubai?
Ny fitadiavana asa any Dubai dia mitaky faharetana sy fahavononana. Noho izany, amin'ny ankapobeny, tsy ny rehetra no hahazo fitahiana amin'ny fandraisana mpiasa amin'ny manan-tsaina tanàna. Manantena anao fa nahazo toro-hevitra vitsivitsy avy amin'ny Company City Dubai Ary hampiasainao izy ireo mba hahatratrarana ny asa nofinofinao tany Dubai.
Manavao hatrany ny fandaharam-pianarana Vitae anao. Avy eo, tazomy ny taratasy fisaronana noforonina manokana ho an'ny tolotra asa. Alefaso tsy tapaka ny CV jereo ny traikefa momba ny dokambarotra alohan'ny handefasana CV any amin'ireo mpampiasa mety.
Eny, talohan'ny nahafahan'ny olona nandoka tao amin'ny CV. Nefa samy tonga amin'ny farany. Ankehitriny dia vita ny fisavana am-boalohany saika isaky ny mpanatanteraka. Ka raha manamarina izy ireo fa hahavita manimba bebe kokoa noho ny tsara. Ary ao Dubai, misy tsipika manify amin-kitsim-po.
Inona no tokony hataonao mba hahazoanao asa any UAE?
Inona no tokony ataonao alohan'ny handehananao !. Midina ao the lisitry ny fahafahana hahita asa ary asio tsirairay tsirairay. Ho an'ny asa tsara atolotra dia tokony ho nampihatra ianao ao amin'ny tranonkala asa ara-dalàna ihany.
Hamarino ny mpanolotsaina scam ary manana fahalalana feno momba ny orinasa tsirairay. Fifandraisan'ny fifandraisana na refa manan-danja anjara toerana lehibe eo amin'ny fahazoana asa. Arosoy ny asa an-tserasera ary amin'ny hetsika ofisialy ho an'ny asa bebe kokoa.
Noho izany, mandehana ao amin'ny tranokala ary ampio ny adiresy tranonkala. Hitanao ireo orinasa ireo sarotra ny mandinika online. Tsy tokony heverinao ny mandoa vola amin'ireto recruiters ireto. Ny sasany amin'izy ireo dia afaka manampy anao amin'ny asa ho anao. Saingy soa ihany, orinasa tsy manao scam fotsiny ny ankamaroany.
Eritrereto daholo ireo voalaza etsy ambony!
Dubai sy ny fitadiavana asa dia sarotra atao amin'ny fitantanana. Betsaka ny sakana sy an'arivony, mazava ho azy, hahitana ny nofinofinao mety ho tsy misy mahavidy azy mihitsy amin'ny farany.
Hahazo asa atolotra miaraka amin'ny fahaizana fototra vitsivitsy ianao base base commisionera serivisy ho an'ny mpanjifa. Na izany aza, ny fahazoana ny toeran'ny nofinao dia mety tsy ho vita any Dubai hatramin'ny voalohany. Noho izany, miezaha hahazo tolotra ho an'ny asa eo am-piandohana ary miakatra moramora amin'ny sehatra orinasa. Ka inona no tokony ataonao any Dubai? Azo antoka fa mifindra amin'ny dingana manaraka ny asanao. Fikarohana asa sy etika miasa. Mijanòna manonofy momba ny asa arahin'asa Arabo.
Manome torolàlana tsara ho an'ny asa any Dubai ny orinasam-pifandraisana Dubai City. Ny ekipanay dia nanapa-kevitra ny hampakatra vaovao ho an'ny fiteny tsirairay ho antsika Jobs in Dubai Guides. Noho izany, amin'izao fahatsapana izao, afaka mahazo torolalana, toro-hevitra sy asa any Emirà Arabo mitambatra amin'ny fiteninao manokana ianao.